Ama-venous kanye namathangi aphezulu we-tank → Izingubo zokusebenza • I-P & M embroidery yekhompyutha
Esebenzayo futhi elula kamizelki ikhambi elilungile kuzo zonke izinkathi zonyaka. Ukusebenza kwabo ngezinto ezinhlobonhlobo kuvumela ukuthi bahlanganiswe ama-halves ehlobo futhi amaswidi ebusika. Sikunikeza ama-vests omsebenzi futhi izixwayiso ezenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme.
Awunamikhono hlinzeka ukufakwa kokushisa, unikeze inkululeko yokuhamba, futhi ngenxa yamaphakethe asebenzayo, akuvumela ukuthi uthathe izinto ezidingekayo nawe. Lezi zici ezisebenzayo zikwenza kube yingubo eyaziswa ngabasebenzisi bezinkampani eziningi nezikhungo eziningi.
Sinikeza ukukhetha okuningi kwamamodeli kusuka ku-Aumdayisi, uSedman, uReis futhi ILeber noHollman. Ukukhetha okubanzi kwemibala, osayizi nezakhiwo eziningi kwenza ukusetshenziswa kwama-vests athandwe njengezingubo zokusebenzela, kodwa futhi nezingubo zangasese.
Okokulungiswa kabusha nokwakha abasebenzi, sincoma ama-vests ngamaphakethe amaningi, asiza kakhulu ukugcina izinto ezincane. Izingubo zigcina ukuqina kwazo isikhathi eside sibonga ukusetshenziswa kwezinto ezisezingeni eliphakeme.
Imikhiqizo yenziwa, phakathi kwabanye enziwe ngokotini kanye nophodlela, amanye anezinguquko ezengeziwe. Kubantu abasebenza ezimweni ezinobungozi, sinikezela ngama-vets okuphepha ngemibala yokuxwayisa ngezinto ezibonakalayo.
Izixwayisi lezi yizingubo zokuvikela ezikhethekile ezandisa ukubonakala. Ngaphezu kwalokho, amateyiphu akhombisa ukuthungwa athuthukisa kakhulu ukubonakala ezimweni zezulu ezinzima. Imibukiso isetshenziswa kakhulu phakathi kwabasebenzi abasebenza ngezandla, abamele imisebenzi yomgwaqo, kodwa futhi naphakathi kwabathakazelayo bezemidlalo, ababambiqhaza bemashi, abavakashi kanye nezingane zesikole nentsha.
Imikhiqizo yethu ihlangabezana nawo wonke amazinga asemthethweni afanele. Lapho ukhetha i-vest, kubalulekile ukuyishintsha kahle ukuze ibe ukuphakama kwakho, ngoba imichilo ekhombisa kufanele ibe sezingeni lezibani zemoto. Ukulungela okubi kuzoholela ekusebenzeni okuncane ngenxa yokuguquka kwezinto ezibonakalayo.
Amazinga wokubonakala kwama-vests alawulwa yi-EU standard EN 471: 2003, ehlukanisa amazinga amathathu wokubonakala:
1, ngezinga eliphansi kakhulu lokubonakala, asetshenziswa kuphela kumthamo womgwaqo,
2, enamazinga aphakathi wokubonakala, ahlangabezana nezidingo zokugqoka zokuvikela,
I-3, ingubo ephezulu kakhulu ebonakalayo enemivimbo eminingi ekhombisa ngobubanzi obuncane obungama-5 cm.
Ezitolo zethu, sinikela ngezingubo ezisezingeni eliphakeme ezisezingeni eliphakeme ezilungele ukusetshenziswa emsebenzini.
Sine izihloko zamathangi izinkampani ezinjenge-Adler neLeber & Hollman.
Sinikela ngamamodeli anomoya anikezelwe ikakhulukazi entwasahlobo nasehlobo kanye namamodeli afakwe imishini azosetshenziswa ekwindla nasebusika.
Ngokuya ngesitayela, ungakhetha izinhlobo ezinamaphakethe amaningi ukwenza lula umsebenzi wesibonelo, ama-fitters noma abasebenza ngogesi. Iziqongo zamathangi zilungele imisebenzi yansuku zonke, zisiza ukufudumala. Imibala etholakalayo, kufaka phakathi i-camo, ikuvumela ukuthi uyilungise ngokwezimo kanye nokuthandwa komuntu ngamunye, isb. Amahlathi noma abadobi.
Izihloko zamathangi zenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, iningi lazo elinengqimba yangaphandle ye-polyester evikela umoya noma imvula. Amamodeli amaningi anama-collars okusukuma awokuvikela okungcono kumakhaza.
Ukwenza okuthandwa nguwe kube nodumo olukhulu
Amakhasimende amaningi ayakwazisa ubuntu nobuntu, ikakhulukazi uma abasebenzi benza umsebenzi wokumelana ukuxhumana nalabo abangaba osonkontileka kanye namakhasimende.
Awunamikhono ngokuprinta kuyindlela evamile yokumaka izingubo. Unalokhu engqondweni, cabanga indlela ephezulu yokuphrinta engamelana nomonakalo, ukulahleka kombala nokugeza okushisa okuphezulu. Kungakho sincoma ukuthi kube okwenziwe ngezifiso okuqinile ukugqokwa kwamakhompyutha. Sikumema ukuba uvakashele isitolo sethu esiku-inthanethi www.pm.com.pl noma ku-Allegro "PRODUCER-BHP".
izihloko zamathangi zomsebenziama-vests omsebenziizihloko zamathangi ezinophawu lwentengisoizihloko zamathangi eziphrintiweumsebenzi wabesifazaneimigoqo yomgwaqoumsebenzi wamadoda uvalaizivikeloumsebenzi wamadoda wokufakelwaamavesti omsebenzi afakwa ngciamavesti omsebenzi aboshwe ngamadodaimisebenzi ekhombisa ukuvezwaama-vests omsebenziumsebenzi ivesti Allegroamavesti omsebenzi wasehloboamavesti omsebenzi afakwa ngciimisebenzi ekhombisa ukuvezwaUmsebenzi we-OLX uvalaumsebenzi usebenza ngama-printamavesti omsebenzi wasebusikaamavesti okusebenzaizingubo zokugqoka
5 / 5 ( 10 amavoti )